Howgalo ka dhan ah Argagixisada Al shabaab oo ka Bilowday Gobolka Hiiraan | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Howgalo ka dhan ah Argagixisada Al shabaab oo ka Bilowday Gobolka Hiiraan
Howgalo ka dhan ah Argagixisada Al shabaab oo ka Bilowday Gobolka Hiiraan
Muqdisho (SONNA) Ciidamada Xoogga Dalka ayaa Gobolka hiiraan waxaa ay ka bilaabeen Howlgalo Maleeshiyaadka Nabad diidka ah ee Al shabaab looga saarayo Deeegaanada Gobolka Hiiraan ay kaga sugan yihiin.
Howlgaladaan oo Ciidamada Xooggu ku doonayaan in maleeshiyaadka Argagixisada Al shabaab looga saaro Hiiraan kuwaasoo dhiibaatooyin ku haaya Bulshada ku nool deegaanada Gobolka hiiraan.
Ibraahim Maxamed Geedi Wariyaha Warbaahinta Qaranka ee Gobolka Hiiraan ayaa soo sheegaya in Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed ay wadaan dadaalo maleeshiyaadka Nabad diidka ah ee Al shabaab looga sifaynayo Dalka.
Ciidamada Xoogga Dalka ayaa deegaano dhaca Koonfurta iyo Bartamaha Dalka waxaa ay ka wadaan qorshayaal Maleeshiyaadka Al shabaab looga dulqaadayo Dhibaatooyinka ay ku hayaan Shacabka Soomaaliyeed mudane sharafta iyo Cisiga.
Faah faahin halkaan kala soco
Previous articleXukuumadda Pyongyang oo gantaal riddo dheer mar kale tijaabisay
Next articleMaamulka G/banaadir oo dib ugu celiyey dhul si sharci darro ah looga heystay caruurta Madaxweynihii hore ee Soomaaliya “Sawirro”